Manondrana Infirmiera Ho An’Izao Tontolo Izao I Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2017 5:43 GMT
(Marihina fa tamin'ny 23 Jolay 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ny infirmeria no diplaomam-pampianarana malaza indrindra any Filipina ankehitriny. Mpanampy mpitsabo avy any Filipina maherin'ny 100.000 no nandao ny firenena mba hitady lalana tsara kokoa. Araka ny voalazan'ny Departemantan'ny Fahasalamana, 85 isanjato amin'ny mpanampy mpitsabo nahazo diplaoma ao amin'ny firenena no hita any amin'ny hopitaly any amin'ny firenen-kafa.
Ny antony iray mahatonga an'i Filipina ho lohalaharana amin'ny famatsiana infirmiera eto amin'izao tontolo izao, dia noho ny famokarany mpanampy mpitsabo matihanina nahazo diplaoma mahay miteny Anglisy tsara.
Manome fanazavana feno momba ny fampiofanana mpanampy mpitsabo ao amin'ny firenena ny Manila Times .
Manazava ny antony mahatonga azy ho nanao ny asan'ny mpanampy mpitsabo i Ang Blog ni Sayote Queen. Naneho ny karazan'ny tanora avy ao Filipina izay naniry ny hanao asa hafa kanefa niafara tamin'ny fianarana mpanampy mpitsabo ilay bilaogera.
Mihevitra ny An OFW Living in Hong Kong fa tsy ny vola ihany no antony mahatonga ireo infirmiera Filipiana maniry hiasa any ivelany.
Ny teny hoe ‘second-courser’ dia manondro ireo matihanina, anisan'izany ireo dokotera izay miverina mianatra indray mba hianatra ny infirmeria. Mitantara ny asany amin'ny maha-‘second-courser’ azy ny My Life as a Nursing Student (Ny fiainako amin'ny maha-mpianatra infirmeria ahy).
Manasongadina ny savorovoro vao haingana nisarika ny sain'ny besinimaro nisy teo amin'ny mpanampy mpitsabo i Bulatlat: ny tatitra mikasika ny laza adin'ny mpanampy mpitsabo tafaporitsaka, ny fametraham-pialana faoben'ny mpitantan'ny mpanampy mpitsabo tao amin'ny firenena ary ny voalaza fa firaisana tsikombakomban'ny Vaomieran'ny Fampianarana Ambony mba hampidinana ny fenitry ny fanomezan-dàlana ho an'ny sekoly fianarana infirmiera vaovao.
Nanazava ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta fa “tsy nisy ny laza adina tafaporitsaka” nitranga tamin'ilay fanadinan'ny mpanampy mpitsabo.